Nei iwe uchipfeka sutu "yechinyakare" kutamba ballet? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Nei iwe uchipfeka sutu "yechinyakare" kutamba ballet?
Ndakamira pachikuva kunge mweya pazvigunwe, ramba uchitenderedza mutambi weballet achisvetuka rega ndishuvire! Naizvozvo, vasikana vazhinji vakasarudza kupinda mumugwagwa wekutamba! Saka sarudza sutu yehembe dzavo mubatsiri akanaka kuvabatsira kufambira mberi.
Kunyangwe iri hobby, kuvandudza hunhu hwako, kana kuona ballet senzira yekugwinya, iko kushoma kuzviremekedza iwe pachako, mudzidzisi wako, uye vaunodzidza navo kupfeka mayunifomu akakodzera kukirasi.
Sei uchipfeka sutu ye kung fu
Ballet hunyanzvi hunoratidza zvizere runako rwemitsara yemuviri wemunhu. Kupfekedza chete onesie inokodzera ndipo panogona kudzidziswa nemudzidzisi zvakajeka kana kufamba kwako kuripo uye kuti tsandanyama dzako dzakashandiswa nemazvo.
Chekutanga pane zvese, kubva pakuona kwekuchengeteka, iwe unofanirwa kupfeka nyanzvi yekurovedza mbatya mukirasi ye ballet, panzvimbo yekupfeka mbatya dzeyoga kana mbatya dzekujairisa. Zvinodiwa zve ballet zvehunyanzvi zvekupfeka zvipfeko zvakaomarara, donje, kunwisa ziya, kudzidzisa masokisi Sei uchibvunza izvozvo? Kubva pamaonero ekinematiki, simba re ballet kugwinya haringaenzaniswi neyakajairika kurovedza muviri, kuvhura, kusvetuka, yakatwasuka ballet zvinhu zvitatu, saka tsika ye ballet inofanira sungisa mhasuru dzemuviri wese, kuitira kuti mhasuru tambo dzirambe dzakareba.
Anotanga ballet, kunyanya kana uchidzidza ballet semunhu mukuru, kana iko kurovedza muviri kusingaite uye musimba mhasuru haina kukodzera, zvinokonzeresa kuomarara kwemhasuru tambo panzvimbo yekukwirisa, uye kukuvara kwakanyanya kuchakonzera muviri. mbatya dzekurovedza dzinogona kurega mudzidzisi aone mitsara yemuviri uye mamiriro etsandanyama, kutungamira panguva uye kururamisa.Iye akasununguka yoga mbatya uye mbatya dzemitambo, zvinongoviga zvavo zvikanganiso zvavo, mudzidzisi haakwanise kuwana yako mhasuru kufamba kweiyo isiri-standard poindi, zvakare haigadziriswe nekufamba kwenguva, kwenguva refu-isiri-yakajairwa maitiro mhedzisiro zvakakomba zvakanyanya.
Pano tinotora muenzaniso, "shanu" chiitiko chekutanga mubhaletti, kufamba kwayo kwakaringana kutendeutsa zvigunwe, mabvi kumativi emuviri, pasi petsoka mbiri kunze kwekunze kwechidzitiro zvakaenzana nepasi , makumbo akatwasuka akazvimiririra asi akanyatsoenderana pamwe chete, iwo makumbo maviri anotsigira trunk yakatwasuka.Uye vamwe vatangi vanozoita kuti tsoka dzitenderedzwe kudivi asi mabvi achiri kumberi, makumbo maviri akamonyaniswa pamwechete.Kana iwe ukapfeka mbatya dzemitambo dzakasununguka. panguva ino, mudzidzisi haazowane ako mabvi kukanganisa munguva, mukufamba kwenguva, kwete chete gumbo rinenge rakaremara, rakakora, asi zvakare rinokonzera kukuvara kumakumbo nemabvi.
Kutaura pamusoro pazvo, vadzidzi vanogona kuona chikonzero nei tanga tichisimbisa kukosha kwekupfeka mbatya dzekudzidzira ballet!
Chechipiri, kubva pakuona kwekunzwa kwekunzwa, vadzidzi vanofanirwawo kupfeka mbatya dzehunyanzvi dzekudzidzira ballet kukirasi! Ballet koshitomu chikamu chakakosha chehunyanzvi hwe ballet uye inotamba yakakosha basa mukuita kwe ballet. Kuti uwane zvakasarudzika zvekuratidzira zvinoonekwa, akasiyana mafomeni uye mafomu mu ballet anofanirwa kuvimba nemusiyano we ballet koshitomu.
Naizvozvo, kupfeka hembe dzakanaka dzekudzidzira ballet kunogona kukuita zvirinani mumutambo we ballet, zvinobatsira kukudziridza pfungwa yavo yechirango, kuvandudza kutarisisa, hunhu uye maonero epfungwa zvichavandudzawo, iwe uchanzwa kuti mutambi we ballet. pamberi, usaramba kupfeka mbatya dzekurovedza muviri nekuda kwehunhu hwako hwakashata, nekuti mbatya dzekurovedza muviri dzinoita shanduko yemuviri wedu inounzwa nebhaletti zvirinani kujekesa.Zvese mune zvese, yakasimba ballet dress ichaita kuti mukadzi wese ataridze aine chivimbo uye akanaka!
Tarira paunenge uchisarudza chipfeko cheballerina:
1. Mutsipa wepamberi haufanire kunge wakafutisa, asi musana unofanirwa kuvhurika kuratidza mapendekete ako.
2. Inofanira kunge isina maoko, iine majoini egokora anoonekwa. Kana paine maoko, akamonere kumusoro kwegokora.
3. Wedzera jasi rejasi rejasi kusimudza mupendero wesiketi pazvinenge zvichidiwa.
4. Jira rembatya dzemuviri rinowanzo kuve nehusimbe, uye rinogona kupfekwa nevana vanokura kureba zvishoma.Asi kazhinji vanonzwa bendekete kana hudyu "zvakanaka!", Zvinoreva kuti vana vanokura nekukurumidza, kuchinja hombe Hembe dzemuviri! Kune vanhu vakuru, kukombama zvinoreva kuti warema.
Sei Kupfeka Ballet Rokwe?
1. pfeka zvakanaka leggings kutanga, padhuze nemuviri uye inogona kukwana kuputira buti!
2.Ipapo pfeka masokisi, maoko zvishoma padenga rekukwevera, usadhonza zvakaoma!
3. yakateverwa neiyo onesie, mushure mekupfeka yakanaka inoda kutarisa pamberi pegirazi, kuti uone kana pasina kuunyana kana kuomarara mamaki
PS: Usanetseke nezvekupfeka juzi. Kana iwe ukabata mutsipa, dhonza kumusoro. Mapfudzi nemaoko zvinosvinwa padyo padyo, uye pachave nemapete akashata padumbu.
Ndinotsvaira sei mbatya dzangu dzedanzi?
1.Shandisa mvura inodziya pazasi 30â „ƒ, donhedza yakaenzana chiyero chekusarerekera mbichana mvura, fambisa zvakanaka uye sanganisa
2.Dzorera mbatya mukati nekunze, dzinyike zvizere, uye dzvanya iwo!
3. Isa mvura yakachena inodziya pazasi pe30â „ƒ uye dzokorora nhanho dzeââ¡ kuti ubudise furo
4.keep mukati nekunze kwenyika, mumumvuri mweya wechisikigo wakaoma!
Yapfuura:Wadzidza ballet kwenguva yakareba kudaro, unoziva here zvinoreva bhasiketi?
Tevere:Ballet troupe: kuunza yakakwira art mukati inosvika